Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee SEO loogu talagalay liiska aan ku qoran yahay Amazon?
Marka ay timaado socodka SEO ee loogu talagalay liiska Amazon, tartanka ugu weyn ee sida badan la kulma ganacsade kasta oo ganacsi iibsanaya waxaa ka mid ah algorithm raadinta si joogto ah. Sidaa darteed, sida loo la qabsado xaqiiqadan isbedelka ah ee isbeddelka ah oo ka badbaaday tartanka suuqyada ee culus ee xukuma Amazon? Waxaan kugula talin lahaa raacitaanka talladan sahlan ee tilmaame talaabo ah, sida aan aaminsanahay inay tahay midka ugu fudud ee aan weli ku guuleysan karin maaraynta SEO ee liiska wax soo saarka Amazon. Ugu dambeyntii, si aad u aragto alaabtaada waxaad ka heleysaa qalabka ugu badan ee la baaray iyo kuwa ugu baahida badan. Halkan waa sida aad ugu guuleysan kartid tan sidaan ugu haboon ee suurtogalka ah - definicion de inmediatez en fotografia.
La bilow Ereyada muhiimka ah
by dukaammada nool oo raadinaya alaabta halkaas. Oo waxaan kugula talinayaa inaad haysato kickstart oo aad sameysey liiskaaga muhiimka ah ee keywords keywords loo baahan yahay in la gaaro ololahaaga SEO for Amazon liiska waqti dheer. Kuwa kale, waxaan soo jeedinayaa in aan isku dayo mid ka mid ah qalabka cilmi-baarista ah ee loo adeegsanayo sidoo kale waxaan tijaabiyey mashiinka dukaameysiga ganacsiga ee u gaarka ah: Google Planning Keyword (adeegso kahor wax kasta oo kale si aad u hesho sawir buuxa ee ereyada muhiimka ah ee inta badan loo isticmaalo nolosha dukaamada ma aha oo keliya Amazon, laakiin meelo kale oo Webka ah), Sellics (xalka ugu fiican ee lagu helo kickstart wanaagsan leh maskaxda ka hor inta aadan ugu dambeyn qaabeynin liiska warbixinta muhiimka ah ee keyword key target keywords), LSI Graph iyo Thesaurus (waxay ahaan laheyd weyn doorasho ah in ay yeeshaan dhammaan talooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah ee la midka ah isku midka ah ee laga yaabo in aad seegtay bilowga), Moz (waa qalab wanaagsan oo lagu baaro ereyada muhiimka ah iyo helitaanka dhammaan fursadaha qarsoon ee ay isticmaalaan kuwa aadka u dhow ee aad ugu kala duwan tahay).
Ku sii wadista Bixinta Lacagta
Waxay u egtahay mid aan maskax lahayn, hase yeeshee ku dhowaad macaamil kasta waxay raadinaysaa qiimo kala duwan iyo heshiisyada ugu sarreeya. Taasi waa sababta aad u tixgelineyso qiimo dhimista waxa ay noqon kartaa sida dhabta ah ee lagu wanaajinayo SEO-gaaga Amazon ee ku qoran liidashada sare, iyo sidoo kale helitaanka saameyn ballaaran ee raadinta internetka iyo helitaanka dib u eegida macaamiil macquul ah halkaas. Marka, marka liiska alaabtaada ay si guul leh ugu buuxsanto ereyada saxda ah iyo erayada ugu sareysa ee raadinta, waxaa la joogaa waqtigii la tixgelin lahaa bixinta qaar ka mid ah alaabta qiimo jaban, tusaale ahaan habka iftiiminta / heshiisyada ugu fiican, foojarrada, qiimaha ku-meelgaarka, faa'idooyinka maraakiibta, ama xataa hal dhimis yar..Waxaan hubaa in dalbashada xitaa hal istaraatij oo sicir-dhimis ah uu had iyo jeer bixin doono, sheygaaga kuugu soo bandhigayo ugu sareeya natiijooyinka raadinta ee Amazon.
Inaad hubiso inaad ku qanacsaneeysid iibiyeyaasha
U soo jeeda - Amazon markasta ku dheji macaamilka iyo heerka uu ku qanacsan yahay wax kasta oo kale. Marka, samaynta macmiil kasta oo farxad leh waa hab isku mid ah oo ku ool ah SEO oo loogu talagalay liiskaaga Amazon. Sidaa daraadeed, ka feker inaad si taxadar leh u siiso qodobada soo socda ee ku qanacsanaanta macaamilka:
Raac qiyaasahaaga Star, oo koontarool siinta dib u eegista macaamiisha si aad wax uga qabato kuwa diidan ogeysiis gaaban.
U fiirso badeecada iyo tayada adeegga (Order Order Rate) - waxay sidoo kale yihiin qodobo muhiim ah oo SEO ah oo loogu talagalay barnaamijka Amazon.
Helitaanka Bixinta Lacagta La'aanta sidoo kale waa qeyb muhiim ah ee khibradaada ganacsi ee aad siisay qof walba oo ku soo booqda Amazon. Kaliya iska hubi in aad haysatid helitaanka kaydkaaga si aad uga fogaato wax kasta oo aan la heli karin.
Heerka ka baxsan waa mid aad u adag in la xakameeyo, ugu yaraan si toos ah. Laakiin, had iyo jeer waa maadooyin aad u muhiim ah oo muujinaya inta qof ee macaamiisha ah ay ka tagayaan Amazon marka la arko liiska alaabtaada. Kaliya tixgelin inaad soo qaadato Heerkaaga Bixinta ugu yar, sababtoo ah waxay si weyn u wanaajin kartaa jagooyinkaaga darajadaada.